PediaSure® Overview – Pediasure
ကလေးများကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်။ ကလေးများ၏ စားသုံးသောအစားအစာများအလိုက် အာဟာရဓာတ် ကွာခြားမှုများက ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်စွာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖို့ လုံလောက်သော အာဟာရဓာတ် ရရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
2. Huynh DTT. et al. J Hum Diet: doi 10-1111/jhn. 12306
ရရှိနိုင်သော PediaSure ထုတ်ကုန်များ